मार्केटिंग ब्लग लाइक र मननपर्ने | Martech Zone
शनिबार, जनवरी 16, 2010 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
मार्केटिंग ब्लगहरू मेरो दैनिक डाइजेस्ट तालिकामा छन्। म ट्विटरमा मार्केटिंग ब्लगरहरूलाई पछ्याउँछु र मेरो पाठकमा बाजिलियन मार्केटिंग ब्लग फिडहरू (जुन म कहिले पनि राख्दिन)। म प्राय: ब्लग पढ्छु र केहि दिन भित्रै रोकिन्छु किनभने सामग्रीको कारण, अन्य जुन मैले वर्षौंसम्म पढेको थिएँ।
मलाई विश्वास छैन कि इन्टरनेटमा कुनै एकल # १ मार्केटिंग ब्लग छ। म इमान्दार हुनेछु र तपाईंलाई भन्दछु, जे होस् म सेठ गोडिनको किताबहरूको अत्यन्तै सम्मान गर्दछु, मँ उनको ब्लगको प्रशंसक होइन। मैले सेठको नयाँ किताब प्रि-अर्डर गरिसकेको छु, लिन्चपिन: के तपाई अपरिहार्य हुनुहुन्छ?, ... तर म प्राय: उनको ब्लग भ्रमण गर्दिन। सेठ प्रायः छलफलको लागि बमोजिम बाहिर फालिरहन्छ - तर कुनै टिप्पणी बिना, छलफल गर्ने अवसर छैन।
म विविधता छ कि धेरै मार्केटिंग ब्लग प्रदान पढ़ें। मार्केटिंग आफैमा एक धेरै विविध विषय हो, पारम्परिक मिडियाबाट प्रसारण गर्न, लाई प्रसारित गर्न व्यक्तिगत ब्रान्डिङ र नयाँ मिडिया। मार्केटिंगमा समग्र व्यापार, बिक्री, र विज्ञापन रणनीतिहरू पनि समावेश छन्।
मेरो मार्केटिंग ब्लग लाइक
यदि तपाईंसँग मार्केटिंग ब्लग छ भने, तपाईंले दुबै अभ्यास गर्नु पर्छ जुन तपाईंले प्रचार गर्नुहुन्छ र परिणाम साझा गर्नुभयो।
यदि तपाइँ तपाइँको पाठकहरूलाई उद्योग तथ्या .्कहरूको बारेमा सूचित गर्दै हुनुहुन्छ भने उल्टो प्रमाण खोज्नुहोस्। डाटा प्राय पूर्वाग्रहको साथ प्रस्तुत गरिन्छ।
मार्केटिंग ब्लगले उपकरणहरू र मार्केटरहरूलाई समान अभियानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक चरणहरू प्रदान गर्नुपर्दछ।
मार्केटिंग ब्लगले टिप्पणी र प्रतिक्रिया माग्नु पर्छ र ती परिप्रेक्ष्यहरूलाई स्पटलाइट दिनुपर्दछ ... उनीहरूले पाहुना पोष्ट गर्ने अवसरसँग असहमत व्यक्तिहरूलाई पनि अनुमति दिदैछन्।
मेरो मार्केटिंग ब्लग मनपर्दैन
मार्केटिंग ब्लगहरू जसले अवलोकन मात्र गर्दछ, टिप्पणी गर्दछ र रिले जानकारी दिन्छ - कहिल्यै विशेषज्ञतामा हात प्रदान गर्ने छैन जुन सबै ब्लगले प्रदान गर्नुपर्दछ।
मार्केटिंग ब्लॉगरहरू को लागी प्रत्येक पोष्ट को लागी बंद गरी दिनु पर्छ को लागी उनीहरु संग एक प्रकारको उपयोगी जानकारी साझा गरीएको छaबजार... एक औसत पाठक मात्र होईन।
मार्केटिंग ब्लगहरू मार्केटरको बारेमा हुनुहुन्न, तिनीहरू ग्राहक, प्रक्रिया, उपकरण, कार्यनीति र नतीजाहरूको बारेमा हुनुपर्दछ।
कुउसको, म पनि ईच्छा गर्दछ कि त्यहाँ इन्टरनेट मार्केटिंग वा मल्टि-लेवल मार्केटिंग (MLM) र अनलाइन मार्केटिंग ब्लगहरू बीच भिन्नता रहेको थियो। यद्यपि म मल्टि-लेवल मार्केटरहरू द्वारा तैनाती केहि रणनीतिहरूको सम्मान गर्दछु, बजार निर्देशकको साथ ठेठ कर्पोरेशनले उनीहरूका सम्भाव्यताहरूसँग कहिले सम्मिलित हुन सक्दैन। म चाहन्छु कि मार्केटिंग ब्लगहरू स्पष्ट रूपमा आफैंमा भिन्नता होस्।
मार्केटिंग ब्लगमा तपाइँ कुन विशेषताहरू संलग्न भएको पाउनुहुन्छ? कस्ता सुविधाहरू तपाइँलाई छाड्न चाहान्छन्? तपाइँ कुन शीर्षकहरू हामीलाई अधिक कभर गर्न चाहानुहुन्छ? यस पोष्टमा टिप्पणी गर्नुहोस् वा बायाँ प्रतिक्रिया ट्याब प्रयोग गर्नुहोस्।